Iji zụlite ma na-eto eto na warehousing na logistic ọrụ, anyị na-meghere abụọ alaka ụlọ ọrụ na Tianjin na 2004 na Guangdong na 2006. Anyị zubere na ulo oru ohuru imewe katalọgụ kwa afọ maka anyị VIP onye kemgbe 2013.
Anyị mmepụta ike bụ 100 containers kwa ọnwa. Ugbu a, anyị guzosie ike oké ugwu nke nsọpụrụ n'etiti narị zuru ụwa ọnụ azụmahịa mmekọ na ngwá ụlọ mmepụta.
All-ekpuchi ebe ndị 30,000 square mita, tinyere mmepụta ogbako, ule center na nchekwa center. Full set nke elu akpaaka ngwá na ihe karịrị 120 na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na 5 ọkachamara àgwà nlekọta na-ahụ maka ngwaahịa mma. Nkwakọ omumuihe-ekpuchi ebe ndị 2,000 square mita, 20 ọrụ ga na-eso mbukota koodu.
The emebe ụlọ ọrụ na ihe ngosi ụlọ na-ekpuchi ebe nke 500 square mita, 10 Mmepe na-emepụta na-anapụta ihe karịrị ọtụtụ narị ọhụrụ kwa afọ. Kwa afọ, ha na-chepụta a ọhụrụ ngwaahịa katalọgụ maka VIP custmers.We nwere obi ụtọ na-anabata gị ODM ma ọ bụ OEM iji.
TXJ bụ a magburu onwe arụ ọrụ nakwa ebe ọ bụghị naanị n'ihi na nke uru ndị anyị na-elekwasị anya na. It`s n'ihi nke otu, ndị mmadụ na-abịa si dị iche iche ebe-akpọkọta ebe a. Anyị na-a nnukwu ezinụlọ na-elekọta ọ bụla ọzọ, na-arụ ọrụ na-akpụ akpụ na-atụ otu nrọ.
TXJ bụ na ngwá ụlọ azụmahịa na ihe karịrị afọ 20 na mgbe niile mere ka na-ege ntị na-eju afọ ahịa 'mkpa, ịgagharị miri chọrọ ahịa ma na-a mmeri-mmeri. Nzube anyị tinye n'ụlọ gị gị na mma na mma!
"The quality mbụ, ndị ahịa elu" bụ ụkpụrụ ahụ TXJ mgbe niile na-ekwusi on.
ADDRESS Xinzhang emepe Mpaghara, Shengfang Town, Bazhou City, Hebei, China 065701